‘यमराज’लाई कर : बाँच्न तिर्ने कि मर्न ?
जनतालाई एक लिटर स्वच्छ पानी र अलिकति हावासमेत उपलब्ध गराउन नसक्नेहरूले तीन तहमा सरकार हुने अवाञ्छित संरचना खडा गरेर आफ्ना लठैतहरूको रोजगारी निश्चित गरेका छन् । तिनै लठैतहरूको पालनपोषणका निम्ति हामीले कर तिर्ने किन ? अब प्रश्न उठाउने होइन, मुठ्ठी उज्याउन विलम्ब भइसकेको छ । विद्यमान संवैधानिक संरचना र देश एकैपटक बचाउन सकिने सम्भावनाको अन्त्य हुँदै गएको छ । अब पनि नउठ्ने हो भने नेपालका हामी जनता जीवित भएको पुष्टि गर्न निकै मुस्किल पर्नेछ । युवराज खतिवडाहरूको बुद्धिको परिणामका रूपमा आएको अधिक करनीतिले यमराजलाई कर बुझाएजस्तै अवस्तामा आमनेपालीलाई पुऱ्याएको छ । यमराजलाई कर थप बाँच्ने आशामा दिइने हो, तर जतिसुकै कर बुझाए पनि अन्त्यमा उसले मारेरै छोड्छ भन्ने थाहा नभएसम्म मानिस कर बुझाइरहन्छन् र बाँचुञ्जेल पनि मरिरहन्छन् ।